Ole Gunnar Solskjaer oo la siiyey saddex kulan oo uu ku badbaadsado shaqadiisa Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 25 Okt 2021. Mark Bosnich ayaa rumeysan in Ole Gunnar Solskjaer uu weyn karo shaqadiisa Kooxda Manchester United haddii uusan guulo u keenin kooxda saddexda kulan ee soo aaddan kaddib musiibadii ku habsatay xalay oo ay kala kulmeen Liverpool.
Solskjaer ayaa taagnaa guuldarradii 5-0 ee ka soo gaartay kooxda ay coltamaan ee Liverpool, iyagoo weliba ku sugan garoonkooda Old Trafford.
Mohamed Salah ayaa saddexleey ugu shubay, halka Naby Keita iyo Diogo Jota ay ka qeyb qaateen bandhigga goolashii lagu bahdilay Manchester United.
Solskjaer ayaa sheegay in guuldarradu ay keentay in Man United ay hoos u dhacdo dhacdo, laakiin waxa uu rumeysan yahay inuu yahay ninka ku habboon inuu sii wato hoggaanka Kooxda.
Si kastaba ha noqotee Bosnich oo Man United kala soo garab ciyaaray Solskjaer intii u dhexeysay 1999 illaa 2001 ayaa dareensan in Macallinka reer Norway uu weyn karo shaqadiisa Man United haddii uu natiijo fiican kala imaan waayo Tottenham, Atalanta iyo Manchester City ka hor ciyaaraha caalmiga ah.
Iska illow Madrid, Bayern ama PSG, Antonio Rudiger oo wada-xaajood kula jira saddex naadi oo hor leh... (Labo ka mid ah Premier League ayay ka ciyaaraan)